Kiss Kiss အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
4.9.82001 for Android
ဒေါင်းလုပ် XAPK（76.4MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Kiss Kiss: Spin the Bottle
ရိုးရာအနမ်းဂိမ်းများကိုငြီးငွေ့? နမ်းခြင်းအနမ်း - ပုလင်းကိုလှည့်ဖျားနေပြီ။ အကောင်းဆုံးပုလင်းလှည့်ဖျားဂိမ်းတစ်ခုနှင့်ပူးပေါင်းပါ။
အနမ်းလား, မရှက်ပါနဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကမ္ဘာတဝှမ်းရှိလူများနှင့်တွေ့ဆုံပါ။ KID KIX နမ်းခြင်းသည်သင်၏မြို့နှင့်အခြားနိုင်ငံများရှိကစားသမားများနှင့်စကားပြောခြင်း, ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ပျော်စရာများအတွက်အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေသစ်များရှာဖွေရန်ပျော်စရာ, ရိုးရှင်းသောအလုပ်များ။ chat နှင့် swap ချီးမွမ်းမှုများ, ဖော်ရွေပွဲများတွင်ပါ0င်ခြင်း, သင်၏ပြိုင်ဘက်များကို snowballs ဖြင့်ထိုးနှက်ခြင်း,
fun ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကမ္ဘာကြီးကိုဖွင့ ်. ❤အဆင်သင့်စကားပြောသောအခန်းများကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုပါ။ စိတ်ထဲထားလော့။ ဆွဲဆောင်မှု။
❤နေ့စွဲ, ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုနမ်းခြင်း, မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုချီးမွမ်းခြင်း, လက်ဆောင်များနှင့်မှတ်ချက်များကိုချီးမွမ်းပါ။ ❤ သငျသညျ
မိတ်ဆွေအသစ်များနှင့်အတူမိတ်ဆွေသစ်များနှင့်မိတ်ဆွေအသစ်များနှင့်အတူအဆွေအမျိုးအစုများသင်နှင့်နီးစပ်သူအစုများ ဂိမ်းတစ်ခုတွင်ပုလင်းသည်သင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်၏ကျပန်းအသုံးပြုသူအားသင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောအခြားသူကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။ သင်နမ်းသည်ဖြစ်စေမသည်သင်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစားပွဲ၌အသုံးပြုသူများကိုသင်မကြာမီရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မည်။ အခမဲ့ virtual လက်ဆောင်များကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အသုံးပြုသူများကိုချီးမွမ်းပါ, ရိုးရှင်းပြီးပျော်စရာလုပ်ငန်းများကိုပြီးမြောက်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလူများကိုသင်အလွယ်တကူသိရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်လက်ဆောင်သိုလှောင်မှုများစွာကိုစုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်သင်သည် ပို. ပင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလိမ့်မည်။
အနမ်းနမ်းခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ချစ်ကြည်ရေး app နှင့်သင့်အားအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးသည့်ချိန်းတွေ့သည့် app တစ်ခုဖြစ်သောချိန်းတွေ့သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည် တ ဦး တည်းတွေ့ဆုံရန်။ သင်မည်သူမည်ဝါနှင့်တွေ့ဆုံသည်ကိုသင်ဘယ်တော့မှမသိနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်သင်၏ပထမဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။
KISS အနမ်းသည်လူတိုင်းအတွက်အခမဲ့ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဂိမ်းဖြစ်သည်။ မနက်ဖြန်သင်၏ဘဝကိုပြောင်းလဲရန်ယနေ့ပုလင်းကိုလှည့်ပါ။ 😉
Support ကိုဆက်သွယ်ပါ။ [email protected]
Kiss Kiss - kissing games | kiss kiss spin the bottle online game #12
Spin The Bottle - Truth Or Dare? | Best Android Games 2022 | Best Casual Games For Android
Kiss Kiss: Spin the Bottle 4.9.79004
Kiss Kiss: Spin the Bottle 4.9.78002
Kiss Kiss: Spin the Bottle 4.9.77202
yyk star woman
Swan Nyi Min Thway